ရွှေဈေးနှုန်းများ အကျဘက်သို့သာ ဦးတည်နေခြင်း ကြောင့် စောင့်ကြည်သူများနေပြီး ဈေးကွက်တွင် အပိုင်းဝယ်လိုအားရပ်ဆိုင်းလုနီးပါးကျဆင်းနေကြောင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
လေဆင်နှာမောင်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ် အများဆုံး Selfie
၀ုန်းဒိုင်းကျဲနေတဲ့ လေဆင်နှာမောင်းကြီး တစ်ခုကို ကျောနောက်မှာ ထားပြီး Selfie ရိုက်တယ် ဆိုတာ အင်မတန် အန္တရာယ် များတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား တယ်ရီ တက်ဖာဆင်က အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပြ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဓားစာခံများ ကိုကယ်ရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့
ဆီးရီးယားတွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော ဂျာနယ်လစ် ဂျိမ်းဖိုလေနှင့် အခြား အမေရိကန် ဓားစာခံများကို ကယ် တင်ရန် ယခုနွေရာသီက အမေရိကန်စစ်တပ်က ကြိုးစားခဲ့မှုကြောင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပြီး ကယ် ဆယ်ရေးမှာ မအောင်မမြင် ဖြစ်သွားခဲ့ရကြောင်း ပင်တဂွန်က ပြောသည်ဟု သြဂုတ် ၂၁ ရက်က ရိုက်တာ သတင်းတစ်ရပ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၁ နှစ်အရွယ် သမီးငယ်၏ လိင်ကိစ္စကို လျစ်လျူရှုပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်တွင် ငွေညှစ်သည့် မိခင်ကို စွဲချက်တင်
အီဘိုလာ ဟုတ်၊မဟုတ် အိန္ဒိယတွင် စစ်ဆေးရန် IATA၏ ခွင့်ပြုချက် မရသေး
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ စစ်ဆေးခွင့် ထောက်ခံချက် ရရှိပြီးသော်လည်း အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကူးစက်ခံ ရသူဟု သံသယရှိသူ၏ သွေးနမူနာစစ်ဆေးချက်ကို သတ်မှတ်ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ရေး အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရသေးဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေမှူး ဒေါက်တာ ထွန်းတင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အစ္စရေးနှင့် ပါလက်စတိုင်း အပစ်ရပ် ဆွေးနွေးပွဲများ ပျက်ပြက်သွားပြီးနောက်အစ်္စရေးနှင့်စစ်ပွဲများပိုမို ဖြစ်ပွားလာမည် ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံခြားလေေ ကြာင်း လိုင်းများ အနေဖြင့် သြဂုတ် ၂၁ ရက်မှ စတင်ကာ အစ္စရေးနိုင်ငံ တဲလ်အဗစ်မြို့သို့ ပျံသန်းခြင်းမပြုရန် ဟားမက်စ်တို့က သတိပေးလိုက်သည်ဟု သြဂုတ် ၂၁ ရက် က အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း မြေပြိုမှုတွင် သေဆုံးသူအရေအတွက် မြင့်တက် လာဖွယ်ရှိ
ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ဟီရိုရှီးမားမြို့စွန်တွင် သြဂုတ် ၂၀ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် မြေပြိုမှု တွင် သေဆုံးသူ ၃၉ ဦးသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ပျောက်ဆုံးနေသူ ၅၁ ဦး ထပ်မံစာရင်းရရှိထားသောကြောင့် သေဆုံး သူ အရေအတွက် ပိုမိုမြင့်တက် လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ညင်သာစွာ အသက်ဇီဝိန်ခြွေပေးမှု ခံယူရေးအတွက် ဆွစ်ဇာလန်သို့ သွားရောက်သူဦးရေ မြင့်တက်လာ
ညင်သာစွာ အသက်ဇီဝိန်ခြွေပေးမှု ခံယူရေးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား တစ်ဦး ဆွစ်ဇာလန်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည့်ကိစ္စကို လေ့လာမှု တစ်ခုအရ အတည်ပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဟု သြဂုတ် ၂၁ ရက်က သည်တိုင်းအော့်ဖ် အိန္ဒိယသတင်း တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
MPU ကတ်အသုံးပြုသည့် POS စက် အလုံးရေ ၁ဝဝဝ ခန့် အင်တာနက်မရ၍ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရ
Myanmar Payment Union (MPU) ကွန်ယက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးချေမှု လက်ခံသည့်စက် Point Of Sale (POS) စက်အလုံး တစ်ထောင်ခန့်ကို Internet Protocol (IP) လိုင်း မရသဖြင့် အသုံးပြုမှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်းနေသည်ဟု MPU ကွန်ယက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးဇော်လင်းထွဋ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အမှန်တကယ် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဖြစ်လာရေးအတွက် မြေရာအခက်အခဲရှိဟု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆို
ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်းရှိ တန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်။ အစိုးရက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ပေးနေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ယနေ့ချိန်ထိ အောက်ခြေလူတန်းစားနှင့် အလှမ်းဝေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျူးကျော်များကို ဖြေရှင်းရေးအတွက် ဈေးနှုန်းသက်သာသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်မူ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန်မှာ မြေနေရာ အခက်အခဲကြီးမားနေခြင်းက ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက သြဂုတ် ၂၁ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်မှ သစ်တန်ချိန် နှစ်ထောင်ကျော် ထပ်မံရောင်းချပေးမည်
သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်မှ သစ်မာသစ်လုံး ၁,၆၄၆ လုံး (၂,၁၇၂ ဒသမ ၃၃၂ တန်)ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် လာမည့် ၂၈ ရက်တွင် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့သစ် လုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကျင်းပရေး ကော်မတီက ၂၂ ရက်က ထုတ်ပြန်သည်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် တရားခွင်၌ နှလုံးရောဂါဖောက်လာ၍ စစ်ဆေးမှု ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ
လေးရက်အတွင်း ရုံးချိန်းနှစ်ကြိမ်ဆက် စစ်ဆေးခံရသော သာသနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်သည် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် ဒဿ မအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးစဉ် တရားခွင်၌ အသက်ရှုမွန်းကြပ်လာသဖြင့် စစ်ဆေး မှု ချက်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းက ဆိုသည်။
တပ်မှူးသုံးဦး သေဆုံးမှုအတွက် အစ္စရေးကို လက်တုံ့ပြန်မည်ဟု ဟားမားစ် အဖွဲ့ခြိမ်းခြောက်
ဂါဇာကမ်းမြှောင်ဒေသအနီး တပ်စွဲထားသည့် အစ္စရေးတင့်ကားများ Photo - BBC
အစ္စရေး၏ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း မိမိတို့၏ တပ်မှူးသုံးဦး သေဆုံး သွားမှုအတွက် လက်တုံ့ပြန် မည်ဟု ဟားမားစ်တို့က ခြိမ်းခြောက်လိုက်သည်။
၀န်ကြီးများ မည်သည့်နည်းဖြင့်ချမ်းသာသည်ကို တိကျစွာ သတင်းပေးပို့ပါက ငွေကြေးခ၀ါချမှုဥပဒေအရ စစ်ဆေးမည်
အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး ဘာ့ကြောင့်ချမ်းသာနေကြသည်ကို တိကျသော သတင်းပေးပို့မှုပြုလုပ်ပါက ငွေကြေးခ၀ါ ချမှု ဥပဒေအရ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်ရှိကြောင်း ယနေ့ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က UMFCCI တွင် ပြုလုပ် သော တရားမဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ ဗပိာုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ပက်သက်သော အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲက သိရသည်။
MH17 လေယာဉ် ပျက်ကျမှုတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် မလေးရှား နိုင်ငံသားများအနက် ပထမအသုတ်အဖြစ် လူ(၂၀)၏ အလောင်းများ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြီး မလေးရှားအစိုးရက ထိုနေ့ကို နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှု နေ့တစ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ကြေညာခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ ဖိလစ်ပိုင်သွားပြီး လေ့ကျင့်မယ့် ခင်ဝေဖြိုးဟန်
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် Miss International 2014 ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရွေး ချယ်ထားသော အလှမယ်ခင်ဝေဖြိုးဟန်အား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ အလှမယ်ပညာရှင်များထံ စေလွှတ်၍ ပြိုင်ပွဲ အတွက် လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးခင်အောင်ထွန်းကပြော သည်။
သက်တမ်းလွန်ကားတာယာများသုံးခဲ့သည့် ဂျေဂျေခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက် မှု နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ဆေးမည်
တိမ်းမှောက်သွားသည့် ဂျေဂျေခရီးသည်တင်ယာဉ်ကိုစစ်ဆေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ− Yangon-Mandalay Expressway)
အမြန်လမ်းပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့် ဂျေဂျေခရီးသည် တင်ယာဉ် သည် စစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကိုဖြတ်သန်း ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ပန်းမရှိသောတာယာများ အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အဆို ပါအမှုကို နိုင်ငံတော် အဆင့်စစ် ဆေးအရေးယူသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ မှူးကြီးနေဝင်းကပြောကြားသည်။
ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းများတွင် ဆက်ကြေးမကောက်ရန် မပခမှ ကေအိုင်အေသို့ ပြောကြားထား
ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်များပြန်လည်လုပ် ကိုင်ခွင့်ပြုရာတွင် တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေ ရန် ယင်းဒေသရှိ ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့များအား ဆက်ကြေးမကောက်ရန် ပြောကြားထားကြောင်း မြောက် ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)မှ ထိပ် တန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထူးအိမ်သင်ဖျော်ဖြေပွဲ 4TV ရုပ်သံလိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
ထူးအိမ်သင်ဂီတပွဲ တော် လွမ်းခြင်းအားဖြင့် ၁၀ နှစ်တာ ဖျော်ဖြေပွဲကို ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု မြင့် မားသောကြောင့် မူလကအစီအစဉ်မရှိသော်လည်း 4TV ရုပ်သံလိုင်းများမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွား မည် ဖြစ်ေ ကြာင်း Forever Blossom မှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ ကိုပြည့်ဖြိုးဟန်က ပြောသည်။
စည်ပင်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်၍ ဝန်ထမ်းများအတွက် အိမ်ရာခွဲတမ်းလျော့သွားနိုင်
တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် အိမ်ရာများ (ဓာတ်ပုံ−ညီညီဇော်)
စိတ္တရမဟီဝန်ထမ်း အိမ်ရာကို စည်ပင်သာယာ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ပြန်လည် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆော က် ရမည် ဖြစ်၍ ဝန်ထမ်းများအတွက် မူလရည်မှန်းထားသည့် အခန်းအရေအတွက် မပြည့်မီနိုင်တော့ကြော င်း သတင်းရရှိသည်။
လူလေးဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ယာဉ်တိုက်မှုမှဒဏ်ရာရသူများ အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရတော့
မန္တလေးမြို့မှ လူလေး ဦးပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသည့် ၆၂ လမ်းယာဉ်တိုက်မှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိ၍ ဆေးရုံ တက်ရောက်ကုသ နေရသူ သုံးဦးမှာ အသက်အန္တ ရာယ်စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထား မရှိတော့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ယာဉ်ထိန်းဒုတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ယာဉ်မှုစစ်တာဝန်ခံ ဒုရဲမှူး လှိုင်ဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းသားအား သမံတလင်းကို လျှာဖြင့်လျက်ခိုင်းသည့် ဆရာမအမှု ၀န်ကြီးဌာနသို့တင်
အတန်းထဲတွင် စကားများသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသားအား သမံတလင်းကို လျှာဖြင့်လျက်ခိုင်းမှုဖြင့် တိုင်ကြားခံရသော အတန်းပိုင်ဆရာမအမှုကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ ထား ကြောင်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ALS အာရုံကြောရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ‘Ice Bucket Challenge’ အစီအစဉ်တွင် ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များစွာ ပါဝင်
စတီဗင်စ ပီးလ်ဘာ့ဂ်၊ ဂျပ်စတင်ဘီဘာ၊ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနှင့် ဘီလ်ဂိတ်တို့ သည် ALS အာရုံကြောရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ ခေါင်းပေါ်သို့ ရေခဲရေပုံးလိုက် လောင်းချ၍ ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေး သော ‘‘Ice Bucket Challenge’’ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ ကြသူများဖြစ်သည်။
စားသုံးမှုများတဲ့စားဖိုဆောင်သီးနှံခရမ်းသီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးပေးတဲ့ အကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းကအစ ခြေဖျားအဆုံး ဘာတွေကောင်းကျိုးပြုသလဲဆိုတာ လေ့ လာကြည့်ရအောင်ပါ။
IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွင် ပြည်ပတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၀ အနက် ၅၀၀ မှ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှဖြ စ်ကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန်
ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ်နိုင်ငံများတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် အစ္စလာမ္မစ်စစ်သွေးကြွ IS အဖွဲ့တွင် ပါဝင်နေေ သာ ပြည် ပ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၀ အနက် ၅၀၀ သည် ဗြိတိန် နိုင်ငံ တွင်းမှဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေ ညာ လိုက်သည်။
ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် ရာနှင့်ချီသော ရာဇီဒီများ မွတ်ဆလင်အဖြစ် ပြောင်းလဲခံယူ
ရာနှင့်ချီသော ရာဇီဒီ အမျိုးသားများ မွတ်စလင်အဖြစ် ကူးပြောင်းခံယူ နေသည့် ၀ါဒဖြန့် ဗီဒီယိုတစ် ခုကို IS များက အွန်လိုင်းပေါ် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြေပဲဆန် အ၀ယ်များပြားနေခြင်းကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ပဲဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လျက်ရှိ
ဆီစက်ရုံလုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်။ ယခင်လအတွင်း ပဲဆီတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၅၀ဝ ခန့် ရှိရာမှ ဩဂုတ်လလယ်တွင် ၄၁၀ဝခန့် ဖြစ်လာသည်။ ဓာတ်ပုံ-ဟိန်းထက်
တရုတ်မူဆယ်လိုင်းတွင် ဆီထွက်သီးနှံဖြစ်သော မြေပဲဆန် ၀ယ်ယူမှုပိုမိုလာခြင်းနှင့် ဆီကြိတ်ပဲဆန် ကုန်ကြမ်း ရှား ပါး မှုကြောင့် ပြည်တွင်းပဲဆီ ကုန်ကြမ်းဈေး မြင့်တက်နေရာ ပဲဆီဈေးနှုန်းများ မြင့်တက် လာသည်ဟု ဘုရင့်နောင် အခြေစိုက်ဆီလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လတုန်းက စကော့တလန်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဂယ်ရီဝဲလ်ဟာ သူနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ ကာလရှည် ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူဆီက လမ်းခွဲကြမယ် ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ရှစ်နှစ်ကျော် ကိုးနှစ်နီးပါး ချစ်သူတွေ အဖြစ် ရှိခဲ့ကြပြီးမှ ချစ်ရသူက လမ်းခွဲမယ်လို့ ဆိုခဲ့တာကြောင့် အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ် အချစ်ကြီးသူ ဂယ်ရီဝဲလ် အတွက်ကတော့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်ခဲ့သလို ပါပဲ။
မြစ်ရေ မြင့်တက်မှုနှင့် မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုများကြောင့် မန္တလေးတိုင်း စဉ့်ကူးမြို့နယ် ရှိ စည်ပင်ကျွန်းကျေးရွာ ရွာလုံးကျွတ် ပြောင်းရွှေ့နေရ
စဉ့်ကူးမြို့နယ် စည်ပင်ကျွန်းကျေးရွာမှ အိမ်များ ပြောင်းရွှေ့နေမှုကို သြဂုတ် ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ -အောင်သူ)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကူးမြို့နယ် စည်ပင်ကျွန်းကျေးရွာတွင် မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျ တိုက်စား မှုနှင့် မြစ်ရေမြ င့် တက် လာမှုကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် နီးပါး ပြောင်းရွှေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်က ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှု စနစ် (သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၄)
မြန်မာနိုင်ငံလို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံမျိုးတွေမှာ အီဘိုလာရောဂါပိုး ထိန်း ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ကျန်းမာရေးဌာနတင်မဟုတ်ပဲ အခြား အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရော အများ ပြည်သူကပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အီဘိုလာရောဂါပိုး ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း အားလုံး လိုက်နာဆောင်ရွက် သွားကြမယ်ဆိုရင် ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ် နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်ဇနီး ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးအား ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် 2nd High Level Committee Meetingသို့ တက်ရောက် မည့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် General Tanasak Patimapragorn နှင့် ဇနီး Mrs. Penlaksana Patimapragorn ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ပုဂံ-ညောင်ဦးလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်း နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Pisanu Suvanajata 2nd HLC အစည်းအဝေး ထိုင်းပူးတွဲအတွင်းရေးမှူး Lt.Gen. Boonchu Kirdchok နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ တောင်ပိုင်းမှာ အစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု တခုကြောင့် ဟားမတ်အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးတန်းစစ်ခေါင်းဆောင် သုံးဦး သေဆုံးသွား ပါတယ်။ Rafah မြို့က လေးထပ်တိုက်အဆောက်အဦးကို ကြာသာပတေးနေ့က ဗုံးထိမှန်ပြီး အဲဒီမှာပဲ သူတို့ သေဆုံးသွားတာပါ။ အဲဒီ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို နှစ် ၂၀ လောက် အစ္စရေးအပေါ် စစ်ဆင်ရေးတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှု အတွင်းမှာ နောက်ထပ် လူသုံးဦးထက် မနည်းလည်း သေဆုံးခဲ့ တယ်လို့ အစ္စရေး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြော ပါ တယ်။ သေဆုံးသူတွေဟာ Mohammed Abu Shamaleh/ Raed al-Attar နဲ့ Mohammed Barhoum တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဟားမတ်အဖွဲ့ကလည်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသုံးဦးဟာဆိုရင် အစ္စရေးစစ်သားတွေ ကို သတ်ဖြတ်မှု၊ အစ္စရေးစစ်သား Gilad Shalit ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းကက ပြန်ပေးဆွဲမှု စတဲ့ အစ္စရေး အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ အစ္စရေး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Moshe Yaalon က ပြောပါတယ်။